आमाबाबुको सम्पत्ति छोराछोरीले लडेर भए पनि लिनुपर्ने कुरा गलत : संयोजक भट्टराई | नयाँ शक्ति नेपाल
आमाबाबुको सम्पत्ति छोराछोरीले लडेर भए पनि लिनुपर्ने कुरा गलत : संयोजक भट्टराई
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले आमाबाबुको सम्पत्ति छोराछोरीले जसरी पनि पाउनैपर्ने वा लडेर भए पनि लिनुपर्ने भन्ने कुरा गलत भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार राजधानीमा मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन, २०७४ र मुलुकी (अपराध) संहिता ऐन, २०७४ बारे भएको अन्तरक्रियामा संयोजक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘छोराछोरीको पालनपोषण गर्ने आमाबाबुको दायित्व हो । निश्चित समयपछि उनीहरु आफैले गर्नुपर्छ । बाबुआमाको सम्पत्ति छोराछोरीले पाउनुपर्ने, लडेर भए पनि लिनुपर्ने माग गलत हो । यस्तो प्रचलनको अन्त्य नगर्ने हो भने छोराछोरीको पनि विकास हुँदैन र भएको सम्पत्ति भागभण्डा गर्दै जाँदा सिद्धिने र सबै कंगाल हुने स्थिति हुन्छ । बाबुआमाले स्वेछाले दिन चाहन्छन् भने ठीक छ । होइन भने आवश्यक छैन । यो सिधै समृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले सच्याउनको लागि आगामी दिनमा जनमत उठाउनुपर्छ ।’
‘हामीले नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौं । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छौं । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले संविधान कार्यान्यवनमा सधैं भूमिका खेल्छ । नयाँ शक्ति एउटा पार्टी मात्र होइन समृद्धिको अभियान पनि हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
डा. भट्टराईले सरकारले जारी गरेको नयाँ मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन, २०७४ र मुलुकी (अपराध) संहिता ऐन, २०७४ को विषयमा सबै पार्टीका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सबै नेताहरुमा ज्ञान हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । ‘सरकारले जारी गरेको नयाँ मुलुकी (देवानी) संहिता, मुलुकी (अपराध) संहिता लगायतका ऐन कम्तिमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरुसँग हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘किनकी हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरु जनतामाझ लैजाँदैछौं । हामीले स्थानीय तहसम्म बुझाउन सक्नुपर्छ । जानेको छैन भन्न पाइँदैन । ऐनमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका कुराहरु समेटिएका छन् । सबै साथीहरुले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना र पूर्वमन्त्री तथा कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन, २०७४ र मुलुकी (अपराध) संहिता ऐन, २०७४ का विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार डा. तिमिल्सिनाले वर्तमान सरकार दुईतिहाईको भए पनि कमजोर रहेको बताउनुभयो । ‘वर्तमान सरकार दुईतिहाईको छ तर, कमजोर छ । विषयहरु बुझाउन जान्दैन । पत्रकार, डाक्टर र शिक्षकलाई बल प्रयोग गर्न खोज्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।